Waa Maxay Sababta Mkhitaryan Ama Aubameyang Midkood Ugu Ciyaari Karo Arsenal Europe League Hadii Ay Ku Biiraan Arsenal – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta Waa Maxay Sababta Mkhitaryan Ama Aubameyang Midkood Ugu Ciyaari Karo Arsenal Europe League Hadii Ay Ku Biiraan Arsenal
Waa Maxay Sababta Mkhitaryan Ama Aubameyang Midkood Ugu Ciyaari Karo Arsenal Europe League Hadii Ay Ku Biiraan Arsenal
Suuqa kala iibsiga Kooxda Arsenal ayaa noqon doona xiddigo bixi doona iyo xiddigo iman doona maalmaha soo socda iyada oo noqon doonta kooxda ugu mashquulka badan suuqa.
Alexis Sanchez ayaa doonaya in uu ka tago kooxda ka hor maalinta ugu dambaysa suuqa kala iibsiga xilli ay kooxaha ay chelsea iyo Man United isku baacsanayaan adeegiisa xilli uu Theo Walcott ku dhaw yahay in uu dhamaystiro ku biirista Everton.
Xilli la filayo xiddigo tagaya Wenger ayaa u baahan in uu shaki la,aan keeno xiddig cusub kadib qaab ciyaareed liita oo uu soo bandhigtay kooxda.
Xiddiga Bordeux ee Malcom ayaa si weyn loola xiriirinayay kooxda Arsenal inkasta oo ay iman doonaa xiddigo kale oo waaweyn inta lagu guda jiro suuqa January.
Heshiis Kasta oo uu Sanchez ugu biirayo kooxda Man United ayay u badantahay in uu ka qayb noqdo xiddiga Henrikh Mkhitaryan kaas oo ku biiri doona kooxda Arsenal inkasta oo uu xiddigu ka biyo diidayo.
Hadii uu xiddiga reer Armenia ogolaado waxa uu Gunners kula biiri karaa xiddigii ay isku kooxda ahaayeen ee Pierre-Emerick Aubameyang.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ahaa gool dhaliyihii xilli ciyaareedkii hore ee horyaalka Germany halka uu sidoo kale haatan ka mid yahay xiddigaha ugu goolasha badan xilli ciyaareedkan laakiin xiddiga ayay isku dhacsan yihiin maamulka sare ee kooxda reer Germany waxana uu noqon doonaa badalka ugu fiican ee xiddiga reer chile.
Labada saxiix ayaa shaki la,aan ka farxin doona taageerayaasha kooxda Arsenal laakiin Rajo labada xiddig ee Dortmund ka caawiyay in ay gaaraan wareega 4 dhamaadk xilli ciyaareedkii 2015/2016 ayaan jiri doonin maadama ayna labada xiddig u wada ciyaari karin tartanka Europe League.
Xilli ciyaareedkaas Aubameyang ayaa dhaliyay 8 gool oo Europe League ah halka uu Mkhitaryan uu caawiye ka noqday 4 gool.
Labada xiddig midkooda ayaa u ciyaari kara kooxda Arsenal Europe League waana xiddiga Mkhitaryan inkasta oo uu soo ciyaaray champions league.
Xeerka Uefa ayaa sheegaya” hal xiddig oo ah labada xiddig ee aynu kor ku soo xusnay ee soo ciyaaray tartamada Yurub ee wareega Group waliba koox kale u soo ciyaaray xilli ciyaareedkan ma ciyaari karo hadii loo diwaan galiyay wareega xiga”.
Taas ayaa la macno ah in uuna Aubameyang u ciyaari karin Arsenal tartanka Europe League maadama ay kooxda Dortmund u dha-dhacday Europe league kadib markii ay kaalinta 3-aad kaga dhamaystay Group-keedii.